2019 March | Igbo Scholars Forum
Posted by ANEDO on Mar 20, 2019 in publications | 0 comments
Ndịnaya na Ndị Odee Agwa Na Akparamagwa N’ejije Igbo Igbeakụ, Benjamin ChimuatỤlamỤra (Ph.D.) Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian Languages University of Nigeria, Nsukka +234803 315 6026; benjamin.igbeaku@unn.edu.ng Ọnụzulike, Chinyere Ada (MRS) Department of Linguistics, Igbo & Other Nigerian Languages University of Nigeria, Nsukka +234703 988 7466; nkechinyereozioma@gmail.com Ntụcha Asụsụ Ndịnọrụ nke Mkparịta Ụka Dị N’etiti Onye Isi Ala Muhammadu Buhari Na Praịm Mịnịsta David Cameron Gbasara Mpụ 1*Ahamefula, N.O., Udechukwu, C.N, Aboh, S.C., Ezekiel, J.C. Ngalaba Lingwistiiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ, Mahadum Naịjirịa, Nsụka 2Okoye, C.L., ...
Mmetuta Mọfim/Usoro Mmebe Okwu Igbo Waawa n’Odide Okwu Igbo Izugbe n’Ogo Sinịọ Sekọndịrị dị na Steeti Ebonyi na Enugu Si N’aka Dr. Uchenna Fabian Ude Department of Arts Education, University of Nigeria, Nsukka uchenna.ude@unn.edu.ng 08064231662 Ụmịedemede Isiokwu nchọcha a bụ mmetụta mọfịm/usoro mmebe okwu Igbo Waawa n’odide okwu Igbo Izugbe n’ogo sinịọ sekọndịrị dị na steeti Ebonyi na Enugu. Ụmụakwụkwọ n’ogo sinịọ sekọndịrị nọ na steeti Ebonyi na Enugu na-eji mọfịm olu Igbo Waawa asụ ma na-edekwazị Igbo izugbe nke na-emetụta ha n’ule sinịọ sekọndịrị. Ụdị nchọcha e ji nchọcha a bụ nke Exspostu Fakto (Expost factor design), ebe ọnụọgụ e ji mee nchọcha dị 15,684 (puku iri na ise, nari isii, iri asatọ na anọ. E seere ọnụọgụ dị 1,555 (otu puku, nari ise, iri ise na ise) site n’iji usoro nsere nke nhọ na nha tụmbọm (proportionate stratified random sampling technique). Ngwa nchọcha e ji mee nchọcha bụ Nnwale Nhụrụ Anya (observational) Mmetụta Mọfịm Olu Igbo Waawa n’odide okwu Igbo Izugbe (NNMMOIWI). Eji pesenti wee tụcha ihe a chọpụtara; ebe ihe a chọpụtara na-egosi na mọfịm olu Igbo Waawa na-emetụta ụmụakwụkwọ na mmebe okwu Igbo Izugbe. Onye nchọcha tụkwara aro ka ndị nkụzi na-akụziri ụmụakwụkwọ etu e si emepụta okwu Igbo site n’iji mọfịm Igbo Izugbe. Mkpọlite Ntọala Nchọcha Asụsụ bụ otu n’ime njirimara agbụrụ ọbụla nke mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta n’ụdị mkparịta ụka iji mee ka mbunuche ha pụta ihe. Ọ bụ site n’asụsụ ka mmadụ si aghọta ma na-amatakwa ihe onye ọzọ bu n’uche. Asụsụ bụ ihe nrịbaama nke mmadụ ji ezipụta ihe o bu n’obi mgbe ya na ndị ọzọ bịakọtara ọnụ. Ọ bụ asụsụ ka mmadụ na ibe ya ji ekwukọrịta okwu nke mere na e wepụ asụsụ, ọ ga-ahịa ahụ ịmata ihe mmadụ bu n’uche. Asụsụ bụ otu ihe mere ka mmadụ karịa anụ ndị ọzọ dị n’ụwa elu. Farinde (2005), kwadoro na asụsụ bụ nnukwu ihe bara oke uru mmadụ jiri dị elu karịa anụ ndị ọzọ dị iche iche. Agbụrụ ọbụla nwere asụsụ ha na-asụ be ha. Ndị Igbo dịka agbụrụ, nwere asụsụ nke ha na-asụ bụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo so n’otu n’ime asụsụ a na-asụ na Naịjirịa nke a na-asụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala Naịjirịa. Ọzọ kwa, asụsụ Igbo so n’asụsụ atọ (Awụsa, Igbo na Yoruba) gọọmentị etiti ala Naịjirịa wepụtara ka a na-akụzị ma na-elekwa n’ule sinịọ sekọndịrị. Ọ bụ n’ihi oke uru ọmụmụ asụsụ bara mere gọọmentị etiti Naịjirịa jiri kọwapụta nke ọma n’akwụkwọ Federal Republic of Nigeria (2008) na gọọmentị nabatara ma hụ uru asụsụ bara dịka nke e ji akwalite ezi mmekọrịta dị n’etiti mmadụ na ibe ya, nkwụgidesike nke ala Naịjirịa nakwa nchekwaba omenaala dị iche iche. Ya mere nwata ọbụla ga-eji mụọ asụsụ dị na gburugburu ya. N’ịga n’ihu, maka ọdịmma, ịdịkọ n’otu ala Naịjirịa, nwata ọbụla ga-amụrịrị otu n’ime asụsụ ọdịnaala Naịjirịa: Awụsa: Igbo na Yoruba (FRN 2008). Nke a gosiri na nkụzi na ọmụmụ asụsụ ndị ahụ a kpọrọ aha ebe a dị nnukwu mkpa n’ụlọakwụkwọ Naịjirịa dị iche iche; ma nke praịmarị, sekọndịrị nakwaazị ndị dị elu. Asụsụ Igbo bụ asụsụ ọdịnaala e jiri mara ndị Igbo nke a na-asụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Ala Igbo ebe a na-asụkarị asụsụ Igbo dịka ndị nwe asụsụ a bụ na steeti ise gụnyere: Abịa, Anambra, Ebọnyị, Enugu na Imo. N’ ime asụsụ atọ (Awụsa, Igbo na Yoruba) gọọmentị nabatara ka a na-akụzi n’ ụlọakwụkwọ dị na Naịjirịa, asụsụ Igbo so na ya. Asụsụ Igbo bụ nke ụdaolu.N’ọmụmụ asụsụ Igbo n’ụlọakwụkwọ, ọ bụ Igbo Izugbe ka a na-akụziri ụmụakwụkwọ. Igbo Izugbe bụ Igbo...
Posted by ANEDO on Mar 20, 2019 in Igbo, publications | 0 comments
Ejirimara ndị Igbo na ụzọ A ga-esi A Kwalite Ejirimara ndị a si n’aka: Ngozi E. Charles-Owuamanam Sukulu Nke Jenaraal Sutọdisi Alvan Ikoku Feduraal Koleji Nke Edukeshọn, Owere. 08034127477. Okwu Mmalite Ejirimara dịka ịkowa ya, bụ akparamagwa dị iche iche nke a na -ahụpụta n’ime ndụ mmadụ ma ọ bụ obodo . Mmadụ ọbụla ma ọ bụ obodo ọbụla nwere ihe dị iche iche e ji ama ya. A bịa n’ala Igbo, okwu a bụ Igbo nwere nghọta ato. Nke mbụ, ọ na-egosi ebe obibi nke a na-akpọ ala Igbo. Nke abụọ, ọ na-egosi ndị bi ya bụ ebe nke a na-akpọ ndị Igbo. Nke atọ, ọ na-egosi olu okwu nke a na-akpọ asụsụ Igbo. A bịa n’asụsụ, asụsụ Igbo bụ asụsụ juputara n’olu dị iche iche. Olu ndị a niile bụ otu n’ụdị otu asụsụ mana ha nwere otu ha si akpọ ihe aha na otu ụda asụsụ ha dị , dịka Igbo Ọnịcha , Igbo Owere , Igbo Ikwere , Igbo Bendel nakwa Igbo ndị ọzọ. Ejirimara ndị Igbo bụ omenaala na ọdịnaala ha nke asụsụ bụ otu n’ime ha. Eji m aka na ọtụtụ ndị Igbo anyị taa maara nke ọma na site na afọ ise nke na-abịa abịa dịka otu onye mba Amerika kwuru sị, asụsụ (ejirimara) Igbo ga-abụ ihe e chefuru echefu. Ihe kpatara otu a bụ ihe anyị ga-eleba anya n’akwụkwọ a. Ọzọ kwa, akwụkwọ a ga-elebe anya n’ụzọ di iche iche a ga-esi kwalite ejirimara ndị Igbo. Ọtụtụ ụmụaka, ndị okorobịa nta na agbọghọbịa nta nke ndị Igbo bụzị ndị jiri omenaala ndị ọzọ mere omenaala nke ha taa. A na-ahụ akparamagwa nke a tumadị ebe asụsụ ha nọ , ebe ha jiziri asụsụ bekee merezịa asụsụ Igbo ha. Eji m oghere n’ekele mmadụ niile tinyere aka n’icheputa ihe odide gbasara ụzọ a ga-esi akwalite ejirimara ndị Igbo ma dekwa ya n’Igbo ebe onye ji aka ya bụ onye ọkammụta dị elu bụ Dọkịta Oriakụ Lucy Apakama n’ụlọ akwụkwọ a di elu bụ Alvan Ikoku Feduraal Koleji nke Edukeshon, Owere. N’ịkọ ya dịka akụkọ na ụbọchị Dọkịta Oriakụ Apakama na-agwa otu onye nọ ebe mụ onwe m nọ na ọ chọrọ ka onye ahụ soro tinye aka n’ihe odide nke a ga-eji kwalite asụsụ Igbo n’obodo anyị, anụpere m ihe ọ gwara onye ahụ werekwa gwa ya sị na achọkwara m isoro ha wee dee ya bụ akwụkwọ. Mgbe onye mụ na ya nọ n’otu sukulu bụ Jenaraal Sutodisi nke Alvan nụrụ ihe m gwara Dọkịta a, o tiri mkpu ma chịkwa ọchị sị m n’ụdị ajụjụ: “Bịa ị ...
Ọghọm dị na Ngwakọrịta Asụsụ Igbo na Asụsụ Bekee: Nrụtuaka n’Asụsụ Mgbasaozi Azụmahịa Ndị na-ere Ọgwụ Ọgwọnnuọrịa (Multicure Medicine) nke Nweze, Ifeoma M. (Ph.D.) 1 Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike Ikwo, Ebonyi State, Nigeria ifeomanweze62@yahoo.com 08030965053 na Mpamugo, Emmanuel E2 Ebonyi State University, Abakaliki Ebonyi State, Nigeria nwaokebest@gmail.com 08061109362 Ụmịedemede Asụsụ Igbo bụ asụsụ e jiri mara ndị Igbo. Ọ bụ otu njirimara ndị Igbo kacha dị ọkpụrụkpụ ma karịcha pụta ihe nke ọma. Asụsụ Igbo nwere usoro, ma n’odide ma n’ọsụsụ. Ya mere e ji nwee mkpụrụedemede ndi e pụtara e ji ede ya iji mee ka ya bụ asụsụ tozuo oke ma kwụrụ chịm. Ndị Igbo nwe asụsụ na-agwakọrịtazi ya na asụsụ Bekee Ọ dịzie ka a ga-asị na asụsụ Igbo egheghi eghe. Ọ bụ omume dị otu a kpalitere ndị nchọcha a ileba anya n’asụsụ Igbo; ngwakọrịta asụsụ nakwa ụzọ ha si angwakọrịta asụsụ Igbo na asụsụ Bekee iji tule mmekpahụ o nwere ike iwetara asụsụ Igbo. Ndị nchọcha gbadoro ụkwụ n’atụtụ ngwakọrịta asụsụ nke Esen (2016) wee tulee njatule a natara. Ndị nchọcha chọpụtara na ọ bụ etinyeghi uchu na ejighi ihe kpọrọ ihe butere ụdị akparamagwa a maka na okwu bekee ndị a gwakọrịtara ha na asụsụ Igbo nwechara ihe a na-akpọ ha n’asụsụ Igbo. Nke a na-bute nnukwu ihe ndọlaazụ nye ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo. ọghọ ime ka asụsụ Igbo ghara ịkwụrụ otu o kwesiri. Ọkpụrụkpụ okwu: Asụsụ, Ngwakọrịta asụsụ na Ọghọm Ndubanye Asụsụ bụ usorookwu a haziri ahazi nwere nghọta nke mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta. Ndị maọbụ otu ọbụla nọ n’ụwa a nwere asụsụ ha na-asụ ma bụrụ asụsụ njirimara ha. Asụsụ na omenala mba na-agakọta ọnụ. N’ịkwado nke a, Chibuzor (2015) kọwara na Omenala bụ uwe e ji chọọ asụsụ mma. A bịa n’obodo anyị bụ Naịjirịa, e nwere ọtụtụ asụsụ dị iche iche nke ụfọdụ n’ime ha bụ: Igbo, Awụsa, Yoroba, Efik, Ibibio, Urobo, Igala, Nupe, Gwari, Fulani na ndị ọzọ ga mana atọ kacha pụta ihe bụ asụsụ Awụsa, asụsụ Igbo nakwa asụsụ Yoruba. Asụsụ Igbo bụ nke dị anyị mkpa ebe a. Ọ bụ ndị Igbo bụ ndị a na-ahụta na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. .Asụsụ Igbo dịka Ugwu (2017) si kwu sonyere n’asụsụ ezinaụlọ a kpọrọ ‘New Benue Congo’nke sonyere na ‘Kwa sub family’. Ọkọwaokwu Wikipedia (2017) kwuru na, ndị na-asụ asụsụ Igbo ruru nde mmadụ iri abụọ na ise mana mmepe anya na mmepe obodo emeela ka ụfọdụ ndị Igbo ghara asụsụ Igbo na-asụ asụsụ Bekee nke bụ asụsụ ndị ọcha wetara n’ala anyị tinyekwara na gọmentị ala anyị kpebiri na ọ bụ asụsụ bekee bụ asụsụ izugbe a ga-eji na-ekwu ma na-ede ihe niile Oke isụ asụsụ Bekee a, mere ụfọdụ ndị Igbo ji ree ire ha, nke mere na ha chọgodu ịsụ asụsụ Igbo, ha agwakọrịtaa ya na asụsụ Bekee. Nke a na-emetụta ndụ na ụtọasụsụ Igbo. N’itule ihe Okonkwo (1994) kwuru n’edemede Danladi (2013), ọ bụ naanị ndị Igbo bụ ndị na-enweghi mmasị n’ebe asụsụ ha nọ. Bamgbose na ndị otu ya (1995) kwenyekwara na nke a dịka ha katọrọ ndị Igbo sị na ha bụ ndị na-agbaso ihe ndị ọcha karịa ihe sitere na ndụ na omenala ha. Omume ndị Igbo na-emeso asụsụ Igbo adịghị mma. Ya ka anyị ji akpọku ụmụamaala Igbo ka anyị hie asaa n’anya ma lebara asụsụ anyị anya ka o nwee ike ịkwụsi ike. N’ihi ọnọdụ a ka ndị nchọcha a ji họrọ ilebara ndị na-ere ọgwụ ogwọnnuọrịa na-eji igwe okwu na ụgbọala ha ezisa ọhanaeze ozi azụmahịa gbasara ọgwụ ha, ọghọm dị n’ụdị omume a...